Teeny Titans - Teen Titans Go! 1.2.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.2.6 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Teeny Titans - Teen Titans Go!
Teeny Titans - Teen Titans Go! ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Teeny ဖို့အတွက် Titans တွေက, GO! မော်ကွန်းအချိုးအစား၏ RPG အပြင်းအထန်တစ်ဦးပုံများအတွက်ရော်ဘင် join ။ အဘယ်သူမျှမ In-app ကိုဝယ်ယူမှုနဲ့အတူနာရီ Play!
သင့်ရဲ့ကစားသမားစည်းဝေး 3-အပေါ်-3 တိုက်ပွဲများအတွက်ချွတ်ရင်ဆိုင်ရ! စစ်တိုက်ရာတွင်ဘားနှင့်အတူစစ်မှန်သောအချိန်အတွက်စူပါရွေ့လျားထွက်တွေဆီကနေ။ ကြောက်မက်ဘွယ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုဖွင့်နှင့်သင့်ပြိုင်ဘက်ကိုဆင်းယူသင့်ရဲ့သူရဲကောင်းများအကြားသို့ပြောင်းပါ။
77 Collection ကိန်းဂဏန်းများ
ရမှာဖြစ်ပါတယ် '' em အားလုံးလု! Harley Quinn, အပြာရောင်ပိုးတောင်မာ, အဲဖရက် Pennyworth, Kid Flash ကို, အ 80s ဖို့အတွက် Titans တွေက, Batgirl, တောက်ပနှင့်များစွာသောပိုပြီးအပါအဝင်အားလုံး 77 Teeny ဖို့အတွက် Titans တွေကကိန်းဂဏန်းတွေ, စုဆောင်း! အဆင့်တက်နှင့် ပို. ပင်အစွမ်းထက်စွမ်းရည်အဘို့သင့်သင်္ဘောသဖန်းသီးပေါင်းစပ်။
Jump CITY စူးစမ်းရန်
သင်အကြိုက်ဆုံးစူပါသူရဲကောင်းကိန်းဂဏန်းများအဘို့အစျေးဝယ်ဖို့သိမ်းထားဖို့စတိုးကနေအပြေးပြိုင်ပွဲ။ အထူးမစ်ရှင်ဖြည့်စွက်ပြိုင်ပွဲဝင်သဖြင့်, ဤနေရာသို့သွားရန်စီးတီး, Mega Teeny ချန်ပီယံဖြစ်လာရန်သင့်ရဲ့ခရီးအပေါ်အသစ်များကိုဒေသများသော့ဖွင့်!
Teeny ဖို့အတွက် Titans တွေကရော်ဘင်, Starfire, Cyborg, Raven နှင့်သားရဲ Boy ကနေမူရင်းနောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့ features!
ဒီဂိမ်းကိုအောက်ပါဘာသာစကားများရရှိနိုင်ပါသည်: အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, အီတလီ, စပိန် (လက်တင်အမေရိကန်), ပျေါတူဂီ (ဘရာဇီး), ရုရှား, တူရကီ, ကိုးရီးယား, ဂျပန်
သငျသညျဒီ app နှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှရှိခြင်းဆိုရင်တော့ advanced.platforms@turner.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရသည်။ သငျသညျသို့အပြေးနေတဲ့သင်တို့ကဲ့သို့အသုံးပြုနေသောအရာကိုစက်ကိရိယာနှင့် OS ဗားရှင်းကိစ္စရပ်များအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
ဒီ app ကာတွန်းကွန်ယက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှအခြားထုတ်ကုန်များ, ဝန်ဆောင်မှုများ, ရှိုးများသို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှု feature ကြော်ငြာများပါဝင်နိုင်သည်။
Teeny Titans - Teen Titans Go! အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Teeny Titans - Teen Titans Go! အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Teeny Titans - Teen Titans Go! အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Teeny Titans - Teen Titans Go! အား အခ်က္ျပပါ
bonds စတိုး 1.27k 1.87M
Teeny Titans - Teen Titans Go! ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Teeny Titans - Teen Titans Go! အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.2.6
ထုတ်လုပ်သူ Cartoon Network
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.cartoonnetwork.com/legal/priv_tou.html#textBox_priv_a
Release date: 2019-09-21 13:23:13
လက်မှတ် SHA1: 42:65:63:13:49:66:30:2D:EC:65:20:0D:AB:CB:E0:0C:F9:34:3F:53
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Zach Moore
အဖွဲ့အစည်း (O): Turner Broadcasting System Inc
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Georgia
Teeny Titans - Teen Titans Go! APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ